ဟယ်​ရီကိန်း ပင်​နယ်​တီ မဝင်​​ပေမယ့်​ ဆန်​ချို ရဲ့ ဂိုး​တွေနဲ့အင်္ဂလန်​တို့ နိုင်​ပွဲဆက်​ခဲ့ ( ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် ) - SPORTS MYANMAR
ဟယ်​ရီကိန်း ပင်​နယ်​တီ မဝင်​​ပေမယ့်​ ဆန်​ချို ရဲ့ ဂိုး​တွေနဲ့အင်္ဂလန်​တို့ နိုင်​ပွဲဆက်​ခဲ့ ( ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် )
By Edi Tor September 11, 2019
ယနေ့ နံနက်အစောပိုင်း မှာ ကစားသွားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲ စဉ်မှာ အင်္ဂလန် အသင်းက ကိုဆိုဗို အသင်းကို ၅-၃ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုဆိုဗို အသင်းဟာ နောက်ဆုံး ၁၅ပွဲ ဆက် ရှုံး ပွဲမရှိ ကစားထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နာမည်ကြီး အင်္ဂလန် အသင်းနဲ့ အတွေ့မှာ ဒီစံချိန် ပျက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် နည်းပြကြီး ဆောက်ဂိတ်ဟာ ဘူလ်ဂေးရီးယားအသင်းကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လူစာရင်းကို အပြောင်းအလဲ အချို့ ပြုလုပ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ရတ်ဖို့ဒ်ရဲ့ နေရာမှာ ဆန်ချိုကို ပွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။လတ်တလော ရပ်တန့်လို့မရတဲ့ ပုံစံမျိုးပြသနေတဲ့ ကိုဆိုဗို အသင်းကလည်း တောင့်တင်းတဲ့ လူစာရင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။
နယူးကာဆယ်အသင်းရဲ့ စိန့်မေရီကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဒီပွဲမှာ အဖွင့်ဂိုးရခဲ့တာကတော့ ဧည့်သည်ကိုဆိုဗို အသင်းဖြစ်ပြီး ပွဲအစ ၃၄စက္ကန့် မှာပဲ ဘာရီရှာက သွင်းယူပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိုးဟာ အင်္ဂလန် အသင်း ရဲ့ သမိုင်းမှာပြိုင်ဘက်အသင်းကို အမြန်ဆုံးပေးခဲ့ရတဲ့ ဂိုးတွေထဲက တဂိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
England’s goalkeeper Jordan Pickford (R) dives but fails to saveashot from Kosovo’s midfielder Valon Berisha (hidden) during the UEFA Euro 2020 qualifying Group A football match between England and Kosovo at St Mary’s stadium in Southampton, southern England on September 10, 2019. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
ဒီဂိုးမှာ အမှားမကင်းခဲ့တာကတော့ ခံစစ်ကစားသမားမိုက်ကယ်ကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကေမယ့် သူ့ရဲ့အမှားကို ချက်ချင်းဆိုသလို ပြန်လည်ဖာထေး နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၈မိနစ်မှာပဲ ရရှိခဲ့တဲ့ ချေပဂိုးကို သူက ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိုးကိုတော့လက်ရှိအင်္ဂလန် အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ တောင်ပံကစားသမား စတာလင်က သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် ၁၀ မိနစ် လောက်အကြာမှာ ဦးဆောင်ဂိုး ရခဲ့ပြီး ဟယ်ရီကိန်းက သွင်းယူပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
England’s midfielder Raheem Sterling (C) heads the ball to score his team’s first goal during the UEFA Euro 2020 qualifying Group A football match between England and Kosovo at St Mary’s stadium in Southampton, southern England on September 10, 2019. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
ဦးဆောင်ဂိုးပါရရှိခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန် အသင်းရဲ့ ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကော ကစားပုံပါ အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး ဂိုးတွေ ထပ်မံသွင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန် အတွက် တတိယဂိုးကို ပွဲချိန် ၃၈ မိနစ်မှာ ဗိုဂျိုဒါ ရဲ့ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းယူခဲ့မှုကနေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးပြတ်အနိုင်ရနေသလို ပထမပိုင်း ပြီးဆုံး ခါနီးဖြစ်ပေမယ့် အင်္ဂလန်အသင်း ကစားအား မချပဲ တိုက်စစ် တရစပ် ကစားနေခဲ့လို့ ပွဲချိန် ၄၄ မိနစ် နဲ့ ပထမပိုင်းနာကျင်အချိန်ပိုအတွင်း မှာနောက်ထပ် ၂ဂိုးထပ်ရခဲ့ပါတယ်။၂ ဂိုးစလုံးကို စတာလင် ရဲ့ ဖန်တီးပေး မှုကနေ လူငယ်ုကယ်ပွင့်လေး ဆန်ချိုက သွင်းယူပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လည်း ပထမပိုင်းအပြီးမှာ အင်္ဂလန် အသင်းက ၅-၁ ဂိုးနဲ့ ဦးဆောင် ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်အစမှာတော့ အင်္ဂလန် အသင်းထိန်းကစားနေခဲ့ပြီး ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကို သူတို့ရဲ့ ကွင်းဘက်အခြမ်းမှာပဲ ပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
Kosovo’s defender Fidan Aliti (R) reacts afterachallenge from England’s midfielder Jadon Sancho during the UEFA Euro 2020 qualifying Group A football match between England and Kosovo at St Mary’s stadium in Southampton, southern England on September 10, 2019. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကလန်ရိုက်စ်ရဲ့ဘောလုံးဆုံးရှုံးမှုကို ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်မှူး မူရီကီ က ရရှိသွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဖန်တီးပေးမှူကနေ အဖွင့်ဂိုးရှင် ဘာရီရှာ နောက်ထပ် ဂိုးတဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ လို့ ၅-၂ ဂိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးမှာ အင်္ဂလန် ခံစစ်ရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ နေရာယူမှု အလွဲတွေကို သိသိသာသာကြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အင်္ဂလန် အသင်းသားတွေဟာ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရနေတဲ့ အပေါ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သာယာနေပုံပေါ်နေပြီး အမှားအယွင်းတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကိုဆိုဗို အသင်းကလည်း ချေပဂိုးတဂိုးပြန်ရခဲ့ လို့ ကစားကွက် ပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၅၅ မိနစ်မှာတော့ မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ လက်ထိဘောကြောင့် ကိုဆိုဗို အသင်း ပင်နယ်တီ အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒီပင်နယ်တီကို တော့ ကိုဆိုဗို အသင်းရဲ့ အဓိက တိုက်စစ် မှူး မူရီကီက အမှားအယွင်းမရှိ ကန်သွင်းအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ လို့ ၅-၃ ဂိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အင်္ဂလန် တို့ ပင်နယ်တီ အခွင့်အရေးပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီပင်နယ်တီကတော့ အနည်းငယ်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘာကလေအပေါ် ကိုဆိုဗို ကစားသမားတွေ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆပြီး ကွင်းလယ်ဒိုင်က ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအခွင့်အရေးကို ကန်သွင်းအသုံးချခဲ့တဲ့ ဟယ်ရီကိန်း ရဲ့ ကန်ချက်ကို ကိုဆိုဗို ဂိုးသမားမူရစ်က လက်စွမ်းပြ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့ ကိုဆိုဗို အသင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှင်သန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ တော့ နှစ်လုံး ကြီးကြီးမားမားအခွင့်အရေးတွေ သိပ်မရခဲ့လို့ ဂိုးတွေထပ်မမြင်ရပဲ ၅-၃ ဂိုးနဲ့ ပွဲပြီးခဲ့ရပါတယ်။
England’s midfielder Jadon Sancho (C) celebrates with England’s midfielder Raheem Sterling (R) after scoring his second, and the team’s fifth goal during the UEFA Euro 2020 qualifying Group A football match between England and Kosovo at St Mary’s stadium in Southampton, southern England on September 10, 2019. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ၄ ပွဲကစား ၄ပွဲအနိုင်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားကို ဆက်လက်ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီး ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ ပိုပြီးနီစပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုဆိုဗိုအသင်း
ကတော့ ချက် အသင်းရဲ့ အောက် တမှတ်အကွာ အဆင့် ၃ နေရာအထိဆင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဟယျ​ရီကိနျး ပငျ​နယျ​တီ မဝငျ​​ပမေယျ့​ ဆနျ​ခြို ရဲ့ ဂိုး​တှနေဲ့အင်ျဂလနျ​တို့ နိုငျ​ပှဲဆကျ​ခဲ့ ( ပှဲပွီးသုံးသပျခကျြ )
ယနေ့ နံနကျအစောပိုငျး မှာ ကစားသှားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခွစေဈပှဲ စဉျမှာ အင်ျဂလနျ အသငျးက ကိုဆိုဗို အသငျးကို ၅-၃ ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ကိုဆိုဗို အသငျးဟာ နောကျဆုံး ၁၅ပှဲ ဆကျ ရှုံး ပှဲမရှိ ကစားထားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ နာမညျကွီး အင်ျဂလနျ အသငျးနဲ့ အတှမှေ့ာ ဒီစံခြိနျ ပကျြသှားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလနျ နညျးပွကွီး ဆောကျဂိတျဟာ ဘူလျဂေးရီးယားအသငျးကို ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ လူစာရငျးကို အပွောငျးအလဲ အခြို့ ပွုလုပျအသုံးပွုခဲ့ပွီး ရတျဖို့ဒျရဲ့ နရောမှာ ဆနျခြိုကို ပှဲထှကျခဲ့ပါတယျ။လတျတလော ရပျတနျ့လို့မရတဲ့ ပုံစံမြိုးပွသနတေဲ့ ကိုဆိုဗို အသငျးကလညျး တောငျ့တငျးတဲ့ လူစာရငျးနဲ့ ရငျဆိုငျလာခဲ့ပါတယျ။
နယူးကာဆယျအသငျးရဲ့ စိနျ့မရေီကှငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဒီပှဲမှာ အဖှငျ့ဂိုးရခဲ့တာကတော့ ဧညျ့သညျကိုဆိုဗို အသငျးဖွဈပွီး ပှဲအစ ၃၄စက်ကနျ့ မှာပဲ ဘာရီရှာက သှငျးယူပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ဒီဂိုးဟာ အင်ျဂလနျ အသငျး ရဲ့ သမိုငျးမှာပွိုငျဘကျအသငျးကို အမွနျဆုံးပေးခဲ့ရတဲ့ ဂိုးတှထေဲက တဂိုးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီဂိုးမှာ အမှားမကငျးခဲ့တာကတော့ ခံစဈကစားသမားမိုကျကယျကိနျးဖွဈပါတယျ။ဒါကမေယျ့ သူ့ရဲ့အမှားကို ခကျြခငျြးဆိုသလို ပွနျလညျဖာထေး နိုငျခဲ့ပွီး ပှဲခြိနျ ၈မိနဈမှာပဲ ရရှိခဲ့တဲ့ ခပြေဂိုးကို သူက ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီဂိုးကိုတော့လကျရှိအင်ျဂလနျ အသငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး ကစားသမားလို့ ဆိုနိုငျတဲ့ တောငျပံကစားသမား စတာလငျက သှငျးယူပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ ၁၀ မိနဈ လောကျအကွာမှာ ဦးဆောငျဂိုး ရခဲ့ပွီး ဟယျရီကိနျးက သှငျးယူပေးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဦးဆောငျဂိုးပါရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျ အသငျးရဲ့ ရဲ့ စိတျဓာတျကော ကစားပုံပါ အမွငျ့မားဆုံး ဖွဈသှားခဲ့ပွီး ဂိုးတှေ ထပျမံသှငျးရရှိခဲ့ပါတယျ။အင်ျဂလနျ အတှကျ တတိယဂိုးကို ပှဲခြိနျ ၃၈ မိနဈမှာ ဗိုဂြိုဒါ ရဲ့ ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးယူခဲ့မှုကနေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဂိုးပွတျအနိုငျရနသေလို ပထမပိုငျး ပွီးဆုံး ခါနီးဖွဈပမေယျ့ အင်ျဂလနျအသငျး ကစားအား မခပြဲ တိုကျစဈ တရစပျ ကစားနခေဲ့လို့ ပှဲခြိနျ ၄၄ မိနဈ နဲ့ ပထမပိုငျးနာကငျြအခြိနျပိုအတှငျး မှာနောကျထပျ ၂ဂိုးထပျရခဲ့ပါတယျ။၂ ဂိုးစလုံးကို စတာလငျ ရဲ့ ဖနျတီးပေး မှုကနေ လူငယျုကယျပှငျ့လေး ဆနျခြိုက သှငျးယူပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လညျး ပထမပိုငျးအပွီးမှာ အင်ျဂလနျ အသငျးက ၅-၁ ဂိုးနဲ့ ဦးဆောငျ ထားနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒုတိယပိုငျးပွနျအစမှာတော့ အင်ျဂလနျ အသငျးထိနျးကစားနခေဲ့ပွီး ဘောလုံးပေးပို့မှုတှကေို သူတို့ရဲ့ ကှငျးဘကျအခွမျးမှာပဲ ပွုလုပျနခေဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျမှာဒီကလနျရိုကျဈရဲ့ဘောလုံးဆုံးရှုံးမှုကို ပွိုငျဘကျတိုကျစဈမှူး မူရီကီ က ရရှိသှားခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ ဖနျတီးပေးမှူကနေ အဖှငျ့ဂိုးရှငျ ဘာရီရှာ နောကျထပျ ဂိုးတဂိုးသှငျးယူပေးခဲ့ လို့ ၅-၂ ဂိုးဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ဒီဂိုးမှာ အင်ျဂလနျ ခံစဈရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ နရောယူမှု အလှဲတှကေို သိသိသာသာကွီးမွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။
အင်ျဂလနျ အသငျးသားတှဟော ဂိုးပွတျအနိုငျရနတေဲ့ အပျေါ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သာယာနပေုံပျေါနပွေီး အမှားအယှငျးတှရှေိလာခဲ့ပါတယျ။ကိုဆိုဗို အသငျးကလညျး ခပြေဂိုးတဂိုးပွနျရခဲ့ လို့ ကစားကှကျ ပိုကောငျးလာခဲ့ပါတယျ။
ပှဲခြိနျ ၅၅ မိနဈမှာတော့ မကျဂှိုငျးယားရဲ့ လကျထိဘောကွောငျ့ ကိုဆိုဗို အသငျး ပငျနယျတီ အခှငျ့အရေးရခဲ့ပါတယျ။ဒီပငျနယျတီကို တော့ ကိုဆိုဗို အသငျးရဲ့ အဓိက တိုကျစဈ မှူး မူရီကီက အမှားအယှငျးမရှိ ကနျသှငျးအဆုံးသတျနိုငျခဲ့ လို့ ၅-၃ ဂိုးဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျသိပျမကွာခငျမှာပဲ အင်ျဂလနျ တို့ ပငျနယျတီ အခှငျ့အရေးပွနျရခဲ့ပါတယျ။ဒီပငျနယျတီကတော့ အနညျးငယျအငွငျးပှားဖှယျဖွဈခဲ့ပွီး ဘာကလအေပျေါ ကိုဆိုဗို ကစားသမားတှေ ပွဈဒဏျကြူးလှနျခဲ့တယျလို့ ယူဆပွီး ကှငျးလယျဒိုငျက ခှငျ့ပွုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီအခှငျ့အရေးကို ကနျသှငျးအသုံးခခြဲ့တဲ့ ဟယျရီကိနျး ရဲ့ ကနျခကျြကို ကိုဆိုဗို ဂိုးသမားမူရဈက လကျစှမျးပွ ကာကှယျနိုငျခဲ့လို့ ကိုဆိုဗို အသငျးရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ရှငျသနျသှားခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ တော့ နှဈလုံး ကွီးကွီးမားမားအခှငျ့အရေးတှေ သိပျမရခဲ့လို့ ဂိုးတှထေပျမမွငျရပဲ ၅-၃ ဂိုးနဲ့ ပှဲပွီးခဲ့ရပါတယျ။
အင်ျဂလနျ အသငျးဟာ ၄ ပှဲကစား ၄ပှဲအနိုငျနဲ့ အမှတျပေးဇယားကို ဆကျလကျဦးဆောငျသှားနိုငျခဲ့ပွီး ခွစေဈပှဲအောငျမွငျဖို့ ပိုပွီးနီစပျသှားခဲ့ပါတယျ။ကိုဆိုဗိုအသငျး
ကတော့ ခကျြ အသငျးရဲ့ အောကျ တမှတျအကှာ အဆငျ့ ၃ နရောအထိဆငျးပေးလိုကျရပါတယျ။